एक जंगली को सम्झनाहरु: मानव तस्करी को एक stark तस्वीर | वर्तमान साहित्य
एक जंगली को यादहरु
जुआन अर्टिज | | जीवनी, लेखकहरू, नोभेला
Bebi Fernández द्वारा उद्धरण
एक जंगली को यादहरु Valencian लेखक Bebi Fernández sMs द्वारा एक उपन्यास हो। मैले पिए। नोभेम्बर 2018 मा प्रकाशित, यो यस विधा मा लेखक को पहिलो फिल्म हो, र पाठ हो कि उनको बिलोगी खोल्छ जंगली। यो नाटकमा महिलाहरुको तस्करी र यौन हिंसा जस्ता संवेदनशील विषयहरु समेटिएका छन्। फर्नान्डेजले सीधै र खुला भाषा प्रयोग गरी यस अंडरवर्ल्ड को कठोरता प्रकट गर्दछ र कसरी पीडितहरु लाई उनीहरुको स्वतन्त्रता खोसिन्छ र अमानवीय र अमानवीय कार्यहरु गर्न बाध्य गरिन्छ।
मिस बेबी एक नारीवादी हुन् जसले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल wTwitter र Instagram- लाई सक्रिय रूपमा यस कारण मा मद्दत गर्न को लागी प्रयोग गर्दछ। उनको लागि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि उनी आफैंलाई लै gender्गिक समानता र नारीवाद मा शिक्षित। फलस्वरूप, तर्क: "हामी साँच्चै इन्टरनेट को माध्यम बाट समाज परिवर्तन गर्दैछौं। सामाजिक सञ्जाल मेरो पछि पुस्ता को लागी एक क्रूर शैक्षिक इन्जिन हो।
1 एक बर्बर सारांश को यादहरु
1.1 ठूलो निराशा
1.2 कठिन संसार
1.3 नयाँ वास्तविकता
1.4 वेश्यावृत्ति र महिलाहरु लाई दुर्व्यवहार
2 एक जंगली को संस्मरण को विश्लेषण
2.1 उपन्यास को आधारभूत डाटा
2.2.3 अन्य पात्रहरू
3 लेखक को बारे मा, Bebi Fernández
सारांश एक जंगली को यादहरु
Of the को गर्मी मा पन्ध्र बर्ष पछि सँगै, - जैकोबो र एना आफ्नो जेठो सन्तानको पर्खाइमा थिए. उसको रहर थियो कि प्राणी थियो एक पुरुष, ताकि भविष्यमा उसले पारिवारिक ब्यापार सम्हाल्ने छ (लागुऔषध तस्करी, महिलाहरु को लागी उपयुक्त छैन एक जागिर। यद्यपि, जन्म पछि, मानिसलाई लाग्यो कि उसको सबै योजनाहरु बिग्रियो: केटी भएको थाहा भयो.
बच्चा थियो नामित Kअसान्ड्रा —K—। उनको विशिष्ट मचो वातावरण को बीचमा हुर्केको जहाँ महिलाहरु मात्र घर को हेरचाह गर्छन्। सुन्दर युवती - एक कठिन चरित्र र स्पष्ट विश्वास संग - एक बादल हुर्केको थियो जसमा उसको बुबा खुशी भन्दा बढी दु: खको कारण थियो।
जब K १ turned बर्षको भयो, याकूबोको हत्या भयो। त्यो घटना जुन जवान महिला को लागी त्यो भयानक संसार बाट एक निकास को मतलब हुन सक्छ, बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितिहरु लाई ट्रिगर गरीयो।
एक जंगली को यादहरु: ...
मालिक माफियाहरु मध्ये एक जसको साथ उनले व्यापार गरे, सबै aण को एक महत्वपूर्ण संचय को कारण बाट समाप्त भएको थियो। याकूबो को मृत्यु पछि "प्रतिबद्धता" बसालिएको थियो कि अनुमान को बावजुद, आपराधिक समूहका नेता एमिलले के र उनकी आमालाई पैसा तिर्न आग्रह गरे।
दुबै, निर्दोष, आफ्नो जीवन को रक्षा गर्न को लागी अपराधी को आदेश को लागी पेश गरियो। देय, के ले आफ्नो एक वेश्यालय मा एक रिसेप्शनिस्ट को रूप मा काम गर्नु पर्थ्यो, जब सम्म उसको खाताहरु बसालिएको थियो।
वेश्यावृत्ति र महिलाहरु लाई दुर्व्यवहार
यस गुफा मा, K एक भयानक र कठोर वास्तविकता साक्षी: दर्जनौं महिलाहरुलाई दास जस्तै व्यवहार गरिन्छ ... कुटपिट र अपमानित दैनिक। उनीहरु विदेशी हुन् जो "मोडेल को रूप मा एक राम्रो भविष्य" को आधार संग धोका दिए। उनीहरुलाई अपहरण गरीएको थियो, उनीहरुका प्रियजनहरु संग सबै सम्पर्क बाट हटाइयो र वेश्यावृत्ति मा ""ण" तिर्न बाध्य यात्रा को हो कि उनीहरुलाई "प्रतिज्ञा गरिएको भूमि" सम्म पुग्न अनुमति दिईयो।
एक दैनिक आधारमा, एमिल र उसका गुर्खा - "आइस मेन" - सबै महिलाहरुलाई अपमानित राखे। तर, न त आशा हरायो। K ले वश गर्न अस्वीकार गर्नुभयो माफिया द्वारात्यसैले उनले आत्मरक्षा कक्षामा भर्ना गर्ने निर्णय गरे। यो यस्तो थियो रामको जिममा आए, एक आकर्षक युवा krav magá विशेषज्ञ, जसले उनलाई निर्देशन दिए यो मार्शल आर्ट मा।
K र राम को बीच एक तत्काल जडान थियो, तर, उनी प्रेममा पर्न बिरोध गर्थिन्। ती युवतीले पुरुषहरु प्रति यस्तो विकृति विकास गरेकी थिइन् कि उनको लागी एकलाई भरोसा गर्न गाह्रो थियो। यसको भाग को लागी, रामको पनि सहज जीवन थिएन, र दुर्व्यवहार को पहिचान गर्न को लागी जान्दछ, त्यसैले सावधानी को व्यायाम जब उनको नजिक। नेक्सस परिस्थितिजन्य तस्वीर समेकित भने जसबाट कठिन र अप्रत्याशित घटनाहरुको अर्को श्रृंखला प्रकट हुन्छ कि परिणाम को लागी नेतृत्व।
विश्लेषण एक जंगली को यादहरु
उपन्यास को आधारभूत डाटा
एक जंगली को यादहरु को कुल छ १००० पृष्ठहरू, मा विभाजित Cha अध्यायहरू मध्यम सामग्री संग। यो छ तेस्रो व्यक्ति मा वर्णन; फर्नांडीज एक प्रयोग गर्दछ स्पष्ट र बलियो भाषा। कथानक एक मा प्रकट हुन्छ तरल ताल जो बढ्दै छ जबसम्म यसको निन्दा हुँदैन।
उनी एक सुन्दर जवान महिला हुन्, एक सेतो रंग र हरियो आँखाहरु संग कि उनको सौन्दर्य संग चम्किलो। उनी एक दयनीय वातावरणमा हुर्किए, अवैध कार्यहरु र क्रूर पुरुषहरु द्वारा घेरिएको छ जो उनी एक बच्चा थियो जब बाट उनको भारी हानि गरे। जे होस्, यो महान शक्ति छ; उसको उत्कट भावनाले उसलाई साहस संग सामना गर्न को लागी अनुमति दियो कि उसको बुबा को मृत्यु पछि उसलाई छुयो। उनी आफैं र आइसमेन पीडितहरु को लागी न्याय नभएसम्म आराम गर्दैनन्।
उहाँ एक युवा बक्सि gy जिम को मिश्रित दौड मालिक हुनुहुन्छ। उनी वर्षौंदेखि क्राव मागीको अभ्यास गर्दै आएका छन्। प्रशिक्षक भएर पनि, सबैभन्दा खतरनाक र घातक प्रविधि आरक्षित। K लाई भेट्नासाथ, उनी उनको सुन्दरता बाट प्रभावित छन्, तर एकै साथ उनको छाला मा घाउ को एक श्रृंखला देखे पछि उनको भलाई को बारे मा चिन्ता छ। यो थाहा बिना, मात्र उनको संग संयोग भएको तथ्य मात्र उनको जीवन लाई खतरा मा राख्छ।
लेखक यति गहिरो विस्तार संग व्यवस्थित पात्रहरू, कि उनीहरु मध्ये प्रत्येक एक उचित वजन छ, त्यहाँ कुनै "fillers" छन्। Fernández वेश्यालय महिलाहरु को कथाहरु मा विशेष जोड दिए। उनीहरु मध्ये: Katia, Bruna, Marcela, Maisha, Polina र Aleksandra; सबै युवा विदेशी केटीहरु, जो साजिश भर मा आफ्नो जीवन बताउँछन्।
बेबी फर्नांडीजले आफ्नो आवाज उठाउँछिन् र मानव बेचबिखन र उनीहरुले भोग्ने यौन शोषणको परिमाणको सन्दर्भमा उल्लेखनीय मिसाल राख्छिन्। एक काल्पनिक कथा भएको बावजूद, यो कठोर वास्तविकता देखाउँछ कि धेरै महिलाहरु स्पेन मा बस्छन्। लेखक को लागी, समाज यस स्थिति मा आफ्नो पछाडि फर्काउँछ; यस सन्दर्भमा, उनी भन्छन्: "म यो विशिष्ट समस्या को लागी आवाज दिन चाहान्छु किनकि यसको वरपरको मौन मलाई क्रूर लाग्छ।"
एक अपराधी को रूप मा आफ्नो क्यारियर मा, लेखकले यौन दासत्वको भयानक परिणाम देखेका छन्। यो उनको यो बर्बरता को अस्वीकार थियो कि उनको नेतृत्व मा उनको दुई साहित्यिक कामहरु मा सबै चीज कब्जा गर्न को लागी। यस प्रकारका अपराधीहरु संग उनको अनुभव को बारे मा, उनले भने: "मलाई थाहा छ कि उनीहरु कसरी काम गर्छन् र कुनै कानून वा निषेधले उनीहरुलाई रोक्दैन। यसले मात्र यसलाई उपभोक्ताहरु बाट टाढा बनाउनेछ। "
उनी मान्दछन् कि यी माफिया र आपराधिक संरचनाहरुको अन्त्य गर्न शिक्षा आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा, उनले व्यक्त गरे: "मूल्यहरु मा शिक्षा, भावनात्मक खुफिया र सहानुभूति, छ आधारभूत स्तम्भ होइन, तर धेरै आधार जसमा समाधान टिक्दछ महिला हिंसाको दीर्घकालीन समस्या "।
लेखक को बारे मा, Bebi Fernández
बेबी फर्नान्डेज, छद्म नाम Srta द्वारा परिचित। उनी एक नारीवादी कार्यकर्ता हुन्, सामाजिक नेटवर्क मा धेरै लोकप्रियता छ। एक लाख र एक आधा भन्दा धेरै अनुयायीहरु संग, स्पेन मा नारीवाद को सबैभन्दा मान्यता प्राप्त प्रभावशाली मध्ये एक हो।
एक लेखक को रूप मा, उनी साहित्यिक संसार मा काव्य गद्य मा किताबहरु संग शुरू भयो: माया र घृणा (2016)eअदम्य (२०१)), दुबै डायरीहरु छन् कि उनले आफ्नो युवावस्थामा बनाएका थिए। एक उपन्यासकार को रूप मा उनको महान शुरुआत 2018 मा नारीवादी कथा संग बनाइयो एक जंगली को यादहरु. दुई बर्ष पछि, यो पहिलो उपन्यास को सफलता पछि, म एउटै विषय संग जारी र प्रस्तुत: रानी (2021)।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » एक जंगली को यादहरु
चार हावाको जंगल
सेप्टेम्बर। सम्पादकीय समाचार को चयन